Iindaba -Wamkelekile ngokufudumeleyo uMnu Paul Wang, uSihlalo we-C & W International Fabricators base-United States ukuba bandwendwele inkampani yethu, kwaye banike isikhokelo emsebenzini wethu.
Wamkelekile ngokufudumeleyo uMnu Paul Wang, uSihlalo we-C & W International Fabricators base-United States ukuba bandwendwele inkampani yethu, kwaye banike isikhokelo emsebenzini wethu.
Nge-9: 00 kusasa nge-7 kaMatshi, uPaul Wang, uSihlalo we-C & W International Fabricators e-United States, ehamba noZhong Cheng, umphathi wesebe laseShanghai, beza kwiQela leCepai kutyelelo kunye nophando. UMnu Liang Guihua, uSihlalo weQela leCepai, ngehlombe bamkhapha.
Ukusukela ngo-2017, intengiso yeemveliso zepetroleum zasekhaya nezamazwe aphesheya ziye zafunyanwa, kunye nemfuno yoomatshini bepetroleum basekhaya, iivelufa kunye nezinto zeemveliso kwiimarike zangaphandle nazo zonyukile, nto leyo izise neqela leCepai ukuhlangabezana namathuba nemingeni emitsha.
Ithuba lilele kwii-odolo ezandayo, ngelixa umceli mngeni usemfuno yokuphucula ngokuthe rhoqo amandla apheleleyo enkampani ukuze ikwazi ukumelana nokutshintsha kwemfuno yentengiso.
Usihlalo uWang, ekhatshwa ngabasebenzi bezobuchwephesha, ubulunga kunye nolawulo lweemveliso zeCepai Group, batyelele ngononophelo kwaye bahlola yonke inkqubo ukusuka kwizinto ezingavunyelwanga ukugqiba, ukunyanga ubushushu, ukuhlangana kunye nokuhlola ngaxeshanye. inkqubo yemveliso ukuqinisekisa 100% izinga lemfundo iimveliso kunye izincedisi.
Usihlalo uWang wonwabile kwaye wanelisekile yiyo yonke inkqubo yohlolo. Wathembela ngokupheleleyo kwimveliso yeCepai kunye noqinisekiso lomgangatho, kwaye wavakalisa ukuzimisela kwakhe ukuseka ubudlelwane obude kunye nathi. I-Cepai iya kuba sisiqwengana kwikhekhe ngokujoyina inkampani ye-C & W!